यी ४ राशि हुनेहरु ज्यादै स्वार्थी हुन्छन्, प्रेममा परेपछि पुरानो साथीलाई समेत लत्याउँछन् ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / यी ४ राशि हुनेहरु ज्यादै स्वार्थी हुन्छन्, प्रेममा परेपछि पुरानो साथीलाई समेत लत्याउँछन् !
यी ४ राशि हुनेहरु ज्यादै स्वार्थी हुन्छन्, प्रेममा परेपछि पुरानो साथीलाई समेत लत्याउँछन् !
admin January 10, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 132 Views
जब कोहि प्रेममा पर्छ भने सबै कुराको त्याग गर्न समेत तयार हुने गर्छ। प्रेममा पारेसँगै आफ्नो साथी-संगीसँग टाढा भएको समेत धेरैलाइ आरोप लाग्ने गर्छ। कहिँ भने आफ्नो साथी-संगीलाई कुनै पनि हालतमा छोदैनन भने कोहि चाही प्रेमीसँग नजिक भएसँगै सबै देखि टाढा समेत हुने गर्छन्। यस प्रकारको स्वभाव कुन-कुन राशिका व्यक्तिहरुमा हुने सम्भवन धेरै हुन्छ भन्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस् कुन-कुन राशिका मानिसहरु प्रेमीको लागि आफ्नो साथी-संगी छोड्ने गर्छन् त :
जव यस राशिका मानिसहरु प्रेम सम्बन्धमा रहन्छन् तब उनीहरु सम्बन्धमा धेरै गम्भीर हुने गर्छन्। त्यति मात्रै नभएर यस राशिका मानिसहरु गम्भीर मात्र नभई घमण्डी हुने भएका कारण पनि प्रेम सम्बन्धमा हुँदा आफ्नो साथीहरुसँग टाढा रहन रुचाउने हुन्छन्। यदि कोहीको यस राशि भएका व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्धमा रहे आफ्नो प्रेमीबाट पनि यस्तै चाहना राख्ने गर्छन्।
यस राशिका व्यक्तिहरु धेरै भावनात्मक रहने गर्छन्। प्रेम सम्बन्धमा रहँदा यस राशि भएका व्यक्तिहरु आफ्नो प्रेमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन्। आफ्नो रोमान्टिक जीवनमा अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्छन् जसका कारण साथीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा खासै ध्यान दिने गर्दैनन्। मनोवृत्तिको कारण प्रेम र दोस्तीलाई समायोजन गर्न खासै कोसिस नगर्ने गर्छन्।
यस राशि भएका व्यक्तिहरुमा विलासी प्रकृति अत्याधिक रहेको हुन्छ। यस राशि भएका व्यक्तिहरु वास्तवमानै प्रेममा लिप्त हुने गर्छन्। आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्छन् भने यस राशि भएका व्यक्तिहरु प्रेम जीवनको बारेमा धेरैनै गम्भीर समेत रहने गर्छन्। आफ्नो साथीहरुको कारण आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा गार्हो स्थिति शिर्जना नहोस भन्ने समेत सोच्ने भएका कारण आफ्नो साथीहरुलाई छोड्ने गर्छन्।
यस राशि भएका व्यक्तिहरु धेरै तरिकाबाट सोच्ने शक्ति कमि भएको कारण प्रेम साथै मित्रतालाईसँगै समायोजन गरेर लैजान असमर्थ हुने गर्छन्। यस राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो मित्रतालाई अन्जानमानै भुल्ने गर्छन्। साथै प्रेम सम्बन्धको समयमा आफ्नो प्रेमीलाई धेरैनै समय दिनु पर्छ भने यस राशि भएका व्यक्तिहरुको मान्यता रहने गर्छ।
Previous २०२२ मा यी ४ राशिलाई हुदै छ मालामाल भने बाकीलाई सामान्य, जानकारी लिनुहोस कुन कुन राशिको भाग्य चम्किदै छ ?
Next कामुक तस्विर र डान्समा अभिनेत्री मलाइका, ५० बर्ष नजिक पुग्दा १२ बर्ष कान्छा ब्वाइफ्रेण्ड